Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny asidra metabolika sy alkalosis metabolika | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny asidra metabolika sy alkalosis metabolika | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / hafa / Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny asidra metabolic sy alkalosis metabolika
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny asidra metabolika sy ny alkalosis metabolika dia ny fihenan'ny metabolic acidosis ny fihenan'ny pH ny vatana noho ny fihenan'ny fatran'ny serum bicarbonate na ny fiakaran'ny fatran'ny ion hidrôzenina serum, raha ny alkalosis metabolika kosa dia ny fiakaran'ny toetran'ny vatana noho ny fiakarana. amin'ny fihenan'ny bicarbonate serum na ny fihenan'ny fifantohan'ny ion hidrôzenina serum.
Ny ra dia misy asidra sy fotony . Ny habetsaky ny asidra sy ny bases ao amin'ny rà dia azo refesina amin'ny alàlan'ny refy pH. Zava-dehibe tokoa ny fitazonana ny fifandanjana marina eo amin'ny asidra sy ny bases ao anaty ra. Ny fanovana kely aza mety hiteraka olana ara-pahasalamana. Matetika ny rà dia tokony hanana habe somary avo kokoa noho ny asidra. Ny acidosis metabolika sy alkalosis metabolika dia fepetra roa noho ny fiovan'ny toetr'andro ra.
2. Inona no atao hoe Metabolic Acidosis
3. Inona no atao hoe Alkalosis metabolika
4. Fitoviana - Metabolic Acidosis sy Metabolic Alkalosis
5. Metabolic Acidosis vs Metabolic Alkalosis amin'ny endrika Tabular
6. Famintinana - Metabolic Acidosis vs Metabolic Alkalosis
Inona ny asidra metabolic?
Ny acidosis metabolika dia faritana ho toy ny fihenan'ny PH ny vatana noho ny fihenan'ny hafanan'ny serum bicarbonate na ny fiakaran'ny fatran'ny ion hidrôzenina serum. Izy io dia aretina mikraoba mahery vaika mampiavaka ny tsy fifandanjana asidra-base ao amin'ny vatana. Ny asidra metabolika dia mety koa noho ny fitomboan'ny famokarana asidra sy ny fihenan'ny fahafahan'ny voa hamoaka asidra be loatra. Izany dia mitarika aretina antsoina hoe acidemia.
Ao amin'ny akademia, ny tahan'ny rà mahery dia ambany noho ny 7.35. Ny asidra metabolika mivaivay dia mety maharitra minitra vitsy ka hatramin'ny andro maromaro. Matetika izy io dia mitranga mandritra ny aretina lehibe. Amin'ny ankapobeny dia mitranga izany rehefa mamokatra asidra biolojika be loatra toy ny asidra keto sy asidra laktika ny vatana. Ny fanjakana acidosis metabolika mitaiza dia maharitra herinandro maromaro ka hatramin'ny taona maro. Izy io dia mety vokatry ny fiasan'ny voa marefo na ny fandaniam-bolamenana.
Sary 01: Haavo ny bikarbonate amin'ny metabolic acidosis
Ny voka-dratsin'ny asidra metabolika matevina sy maharitra dia samy hafa ihany koa. Ny asidra metabolika mivatravatra dia misy fiantraikany amin'ny rafitry ny aretim-panafody ao amin'ny toeram-pitsaboana raha toa kosa, ny asidra metabolika mitohy dia misy fiantraikany amin'ny hozatra, taolana, voa, ary ny fahasalaman'ny rafitra aretim-po. Ny soritr'aretin'ny asidra metabolika dia misy fisefoana haingana sy madiodio, fikorontanan-tsaina, havizanana, aretin'andoha, torimaso, tsy fisian'ny fahazotoan-komana, jaundice, fitomboan'ny fitempon'ny fony, sns. Ary koa, ny fitsaboana asidra metabolika dia manome bicarbonate sodium am-bava na intravenous hampiakarana ny tahan'ny ra .
Inona ny alkalosis metabolika?
Ny alkalosis metabolika dia faritana ho fiakaran'ny toetran'ny vatana noho ny fitomboan'ny fihenan'ny bicarbonate serum na ny fihenan'ny fatran'ny ion hidrôzenina serum. Toetra miseho izany rehefa lasa alkaline loatra ny ra. Ny alkalôzy dia misy rehefa misy ra be loatra amin'ny alikaola mamokatra iôna karbonika na asidra vitsy mamokatra ion hidrôzenina. Noho izany, amin'ny alkalosis metabolika, ny tahan'ny arterial pH dia ambony noho ny 7.35.
Sary 02: soritr'aretin'ny alkalosis metabolika vs alkalosis
Ny soritr'aretina dia mety misy mandoa, fivalanana, fivontosana amin'ny tongotra ambany, havizanana, fikorontanana, fikorontanana, fanintona ary koma. Ity aretina ity dia mazàna mamantatra amin'ny alàlan'ny famakafakana ny urine. Ny fitsaboana dia misy fampidirana masira, fanoloana potasioma, fanoloana maneziôma, fampidirana klôroza, fanidinana asidra hydrochloride ary fampijanonana ny fampiasana diuretika mahery.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny metabolic acidosis sy ny metabolic alkalosis?
Ny acidosis metabolika sy ny alkalosis metabolika dia fepetra roa noho ny fiovan'ny pH ara-dalàna ra.
Ireo fepetra roa ireo dia vokatry ny metabolika.
Ireo toe-javatra ireo dia mety hiteraka soritr'aretina mahery vaika.
Izy ireo dia azo hamarinina amin'ny alàlan'ny fitsapana urine.
Ireo fepetra ireo dia azo tsaboina amin'ny alàlan'ny fitantanana am-bava na amin'ny alàlan'ny tsiranoka mifandraika.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny metabolic acidosis sy ny metabolic alkalosis?
Ny acidosis metabolika dia manondro ny fihenan'ny PH ny vatana noho ny fihenan'ny fatran'ny serum bikarbonate na ny fiakaran'ny fatran'ny ion hidrôzenina serum. Mandritra izany fotoana izany, ny alkalosis metabolika dia manondro ny fiakaran'ny toetran'ny vatana noho ny fiakaran'ny haavon'ny serum bikarbonate na ny fihenan'ny fatran'ny ion hidrôzenina serum. Ka io no mahasamihafa indrindra ny asidra metabolika sy ny alkalosis metabolika. Ankoatr'izay, amin'ny asidosis metabolika, ny PH an'ny vatana dia ambany noho ny 7.35, fa amin'ny alkalosis metabolika, ny PH an'ny vatana dia ambony noho ny 7.35.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ny fahasamihafana misy eo amin'ny asidra metabolika sy ny alkalosis metabolika amin'ny endrika tabilaoro ho an'ny fampitahana mifanila.
Fehiny - Metabolic Acidosis vs Metabolic Alkalosis
Ny korontana izay misy fiatraikany amin'ny metabolisma dia mety hiteraka fiovan'ny toetr'andro voajanahary. Ny acidosis metabolika sy alkalosis metabolika dia fepetra roa noho ny fiovan'ny toetr'andro ra. Ny acidosis metabolika dia faritana ho toy ny fihenan'ny PH ny vatana noho ny fihenan'ny fatran'ny serum bicarbonate na ny fihenan'ny fatran'ny hidrôniôma serum, raha ny alkalosis metabolika kosa dia ny fisondrotan'ny pH an'ny vatana noho ny fitomboan'ny fatran'ny serum bicarbonate na ny fihenan'ny hidrôma serum fifantohana ion. Noho izany dia mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny asidra metabolika sy alkalosis metabolika.
1. " Inona ny asidra metabolic? ”WebMD.
2. Hecht, Marjorie. " Alkalosis metabolika ." Healthline, Media momba ny fahasalamana, 7 Mey 2020.
1. " Haavo bikan-karbaona amin'ny asidra metabolic " Nosoratan'i MetabolicAcidosisExpert - Asa manokana (CC BY-SA 4.0) avy amin'ny Wikimedia Commons
2. " 2716 Soritr'aretin'ny Alkalosis Acidosis " Nosoratan'i OpenStax College - Anatomy & amp; Physiology, tranokala Connexions , 19 Jun 2013. (CC BY 3.0) tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny toko faha-7 sy ny toko faha-13 Fahasamihafana eo amin'ny ady hevitra sy ny ady hevitra Fahasamihafana eo amin'ny sehatra sy ny sakany Fahasamihafana eo amin'ny mpitsara sy ny mpitsara Fahasamihafana eo amin'ny Asus Eee Pad Transformer Prime (TF201) sy iPad 2
Fahasamihafana eo amin'ny cycle Estrous sy menstrual